२०७३ फागुन १ गते आइतबारको राशिफल - SangaloKhabar
२०७३ फागुन १ गते आइतबारको राशिफल
वि.सं. २०७३ साल फागुन १ गते। आइतबार। इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी १२ तारिख। नेपाल संवत् ११३७ सिल्लागा। फागुन कृष्णपक्ष। तिथि– द्वितीया, २९:१९ बजेउप्रान्त तृतीया।
अधैर्य व्यवहारले समस्या निम्त्याउनेछ भने बोलीमा संयम रहन सक्दा दोहोरो लाभ मिल्न सक्छ। गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्नेछ। सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्। मेहनत गर्दा रोकिएका काम समेत सम्पादन हुने देखिन्छ। विशेष सभा–समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ। पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। सानो प्रयत्नले दिगो फाइदा दिलाउन सक्छ।
सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्व निखार्दै अरूलाई आकर्षित तुल्याउन सकिनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले काममा उत्साह जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने मनग्य धन आर्जन गर्न सकिनेछ। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। तर सानो त्रुटिले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
केही मात्रामा खर्च बढ्नेछ भने पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धामा जुट्नुपरे पनि बुद्धिले काम लिँदा बिस्तारै फाइदा हुनेछ। लगनशीलताले फाइदा दिलाउनेछ। तर तत्कालको लाभ उठाउँदा भविष्यमा नोक्सान हुने देखिन्छ। लामो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। विदेशबाट रकम हातलागी हुने सम्भावना छ।
अवसर आए पनि नयाँ काममा हात हाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। श्रमको पूरा मूल्य प्राप्त नहुने परिस्थिति देखिन्छ। तापनि, मेहनतले उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। काम पूरा नभए पनि आंशिक फाइदा हुनेछ। विशेष भेटघाटले काममा उत्साह बढाउला। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। पदासीन व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन्।
समाजमा तारिफयोग्य काम सम्पादन गर्दै राम्रो उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले भने सताउन सक्छन्। तापनि मेहनतले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ। रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन्। विशेष जिम्मेवारी प्राप्त हुने समय छ। सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ हुने काम शुभारम्भ हुनेछ। तर आफ्नो मेहनतमाथि अरूले दाबी गर्न सक्छन्, सजग रहनुहोला।
काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति रहनेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोला। शुभचिन्तकहरूले सहयोगको तत्परता देखाउनेछन्। आस मारेको फल पुनः प्राप्त हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा कमजोरीका साथै उपचारमा खर्च हुने योग छ। घरेलु समस्याले अलमल्याउला। हुलमुलमा धनमाल जोगाउन सचेत रहनुहोला।
विभिन्न अवसर आए पनि समयमा निर्णय लिन नसक्दा पछि परिनेछ। शुभचिन्तकहरूले आफ्ना कमजोरीप्रति गुनासो गर्न सक्छन्। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सचेत रहनुहोला। भेटघाटमा अलमलिनाले काममा बाधा पुग्नेछ। अरूको आश्वासनमाथि भरपर्दा धोका पाइनेछ। सम्बन्ध बिग्रने चिन्ताले सताउन सक्छ। रमाइलो जमघटको आनन्दबाट वञ्चित भइएला।
आलस्य गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउला। आफ्नाले सहयोग नगर्दा काम बिग्रने डरले सताइरहनेछ। मेहनतको फलमाथि अरूले दाबी गर्न सक्छन्। आँटेका काममा बाधा पुर्याउनेहरू प्रशस्तै हुनेछन्। आफ्ना सूचना बाहिरिने हुँदा समस्यामा पारिनेछ, गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिए पनि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा काम बन्न सक्छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०१, २०७३ समय: ६:५७:५६
२०७९ असार १३ गते सोमवारको राशिफल
ई.सं. २०२२ जुन २७ नेपाल सम्बत ११४२ तछलागा चतुर्दशी, असार कृष्ण चतुर्दशी तिथीं, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायणं, ग्रिष्म...